सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतका दुवै योजनाद्वारा प्रतिफल घोषणा - Aarthiknews
काठमाडौं । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड र सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम–२ ले गत आर्थिक वर्षको प्रतिफल घोषणा गरेका छन् । दुवै योजनाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक लेखापरिक्षण कार्य सम्पन्न गरि प्रतिफल घोषणा गरेका हुन् ।
योजना व्यवस्थापक सिद्धार्थ क्यापिटलको साउन २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरुलाई कर सहित ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम–२ का इकाईधनीहरुलाई ५ प्रतिशत प्रतिफल दिने निर्णय गरेको हो । यस आधारमा सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम–२ का इकाईधनीहरुलाई रू. ६ करोड र सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरुलाई रू. ११ करोड २५ लाख प्रतिफल प्रदान गर्नेछ ।
सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डले रू. १५ करोड इकाई विक्री गरेको हो । यस योजनाको प्रति इकाई खुद मूल्य असार मसान्तसम्म रू. ११ दशमलव १७ रहेको छ । असार मसान्तसम्म यस योजनाको नाफा रू. १५ करोड ३४ लाख ४६ हजार रहेको योजनाले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम–२ ले रू. १२ करोड बराबरको इकाई विक्री गरेको हो । यस योजनाको असार मसान्तसम्म प्रति इकाई खुद मूल्य रू. ११ दशमलव शून्य ८ छ । योजनाले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार असार मसान्तसम्म रू. १२ करोड ९३ लाख ८८ हजार नाफा गरेको उल्लेख छ ।